မှတ်ပုံတင်ပြီးသော POS Brand များ
သတင်း နှင့် အချက်အလက်များ
ဆုချီးမြှင့်ခြင်း နှင့် POS အသုံးပြုပုံ သင်တန်းပေးခြင်း
MPU Payment Gateway ဖြင့် ချိတ်လိုသူများအတွက်
မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ငွေသားကိုင်ဆောင်ပေးခေျမှု အများဆုံးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံး ATM Card များစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ Credit Card များထုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တည်းများဖြစ်ပြီးနောက် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ Credit Card ထုတ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည်ပွင့်လင်းလာပြီးနောက် ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ် ပြောင်းလဲမှုများသည် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်း၏ အရေးပါသောပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်အဖြစ်မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် Myanmar Payment Union (MPU) ကိုအဖွဲ့၀င်ဘဏ် ၁၇ ဘဏ်ဖြင့်စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ငွေပေးချေမှုကွန်ယက်လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အမ်ပီယူ အဖွဲ့အစည်းမှ အများပိုင်ကုမ္ပဏီသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ယခုတွင် အဖွဲ့၀င် ဘဏ်ပေါင်း ၂၃ ဘဏ်ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်ပေါင်း ၂၃ ဘဏ်ရှိသည့်အနက် ၁၉ ဘဏ်မှာ Debit ကဒ်များထုတ်ထားပြီးATM (ငွေထုတ်စက်) နှင့် POS (ငွေပေးချေစက်) များကို စျေးကွက်ထဲတွင် တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ပထမဆုံးဦးစားပေးအနေဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် ငွေသားကိုင်ဆောင်ပေးချေသောစနစ် မှ အီလက်ထရောနစ်ပေးချေမှုစနစ်သို့ပြောင်းလဲ နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။MPU ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ National Payment Switch (NPS) အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်၊ အဖွဲ့၀င်ဘဏ်များအချင်းချင်း အီလက်ထရောနစ် ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ပေးချေမှု လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ခြင်းဖြင့်ငွေသားမဲ့ပေးချေမှုသို့ကူးပြောင်းရန်နှင့် အနာဂတ်တွင် နိုင်ငံတကာ၏ ပေးချေမှုကွန်ယက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် တို့ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်ဘဏ်များမှထုတ်ထားသော UPI (UnionPay) ကဒ်များအသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် Acquiring လုပ်ငန်းများအတွက် UPI (UnionPayInternational) နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် မိမိတို့ အမ်ပီယူကွန်ယက်တွင် ၄င်းတို့၏ကဒ် အသုံးပြုမှုလက်ခံရန် JCB(Japanese Credit Beareau) နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် အမ်ပီယူမှ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အသုံးပြု နိုင်သည့် co-brand ကဒ်များထုတ်ရန်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော UPI ၊ JCB တို့နှင့်သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
26 (A) Settmu Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 8603893, 8603894, 8603983, 8603892, 8603895
www.myanmarpaymentunion.com , www.mpu.com.mm
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar.Copyright © 2017 myanmarpaymentunion.com. All Rights Reserved.